၂၀၁၇ ချီယာပတ်စ် ငလျင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၇ ချီယာပတ်စ် ငလျင်
၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၀၉-၀၇)
၆၉.၇ km (၄၃.၃ mi)
15°04′05″N 93°42′54″W﻿ / ﻿15.068°N 93.715°W﻿ / 15.068; -93.715ကိုဩဒိနိတ်: 15°04′05″N 93°42′54″W﻿ / ﻿15.068°N 93.715°W﻿ / 15.068; -93.715
၉၈ ဦး သေဆုံး၊ ၃၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ
၂၀၁၇ ချီယာပတ်စ် ငလျင် သည် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ချီယာပတ်စ်ပြည်နယ်အနီး မက္ကဆီကိုကမ်းရိုးတမ်းတောင်ပိုင်း၌ ၂၃:၄၉ CDT အချိန်တွင် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ ငလျင်သည် ပြင်းအား ၈.၁ Mw ရှိပြီး Mercalli intensity အမြင့်ဆုံးအဆင့် IX (Violent) ဖြစ်ကာ ချီယာပတ်စ်ပြည်နယ်အနီး၊ တီဟွမ်တီပတ်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ ပီဂျီဂျီယာပန်မြို့၏ တောင်ဖက် ၈၇ ကီလိုမီတာ (၅၄ မိုင်) အကွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ငလျင်ကြောင့် မက္ကဆီကိုစီးတီးရှိ အဆောက်အဦအချို့ တုန်ခါခဲ့ပြီး လူအများအပြား အဆောက်အဦများမှ စွန့်ခွာစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ငလျင်ကြောင့် ၁.၇၅ မီတာ (၅ ပေ ၉ လက်မ) ရှိ ဆူနာမီလှိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆူနာမီ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။ ရာစုနှစ်အတွင်း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအတွက် အပြင်းထန်ဆုံး ငလျင်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ကြောင်း မက္ကဆီကိုသမ္မတက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းငလျင်သည် ပြင်းအားပမာဏ ၈.၆ ရှိ ၁၇၈၇ ငလျင်ပြီးနောက် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒုတိယအပြင်းထန်ဆုံး ငလျင် အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့် အကြီးမားဆုံးငလျင် ဖြစ်သည်။
၁ တက်တိုးနစ် အပြင်အဆင်
၃.၂ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များ
ကိုကိုးကျောက်ထုလွှာသည် မြောက်အမေရိက ကျောက်ထုလွှာအောက်သို့ တစ်နှစ်လျှင် ၆.၄ စင်တီမီတာနှုန်း (၂.၅ လက်မ/နှစ်) ဖြင့် နစ်ဝင်နေသော အနားတလျောက်ပေါ်တွင် တီဟွမ်တီပတ်ပင်လယ်ကွေ့ တည်ရှိသည်။
စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် မက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့တစ်ဝှမ်း၌ ငလျင်သတိပေးချက်များ မှားယွင်းစွာ ထုတ်ပြန်မိခဲ့ရာ အဆောက်အဦများမှ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွေ့ပြောင်းစေခဲ့သည်။ ဤမတော်တဆမှုသည် စနစ်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
ငလျင်လှုပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် မက္ကဆီကိုရှိ ဟိုတယ်တစ်ခုရှေ့တွင် စုဝေးနေကြသူများ
မက္ကဆီကို အမျိုးသား ငလျင်တိုင်းတာရေး အဖွဲ့ (SSN) က ငလျင်ဗဟိုချက်သည် ချီယာပတ်စ်ပြည်နယ်၊ တိုနာလာမြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၁၃၇ ကီလိုမီတာ (၈၅ မိုင်) အကွာ တီဟွမ်တီပတ်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းတွင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဘူမိဗေဒ မြေတိုင်းအဖွဲ့ (USGS) က ငလျင်ဗဟိုချက်သည် ချီယာပတ်စ်ပြည်နယ်၊ ပီဂျီဂျီယာပန်မြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၈၇ ကီလိုမီတာ (၅၄ မိုင်) အကွာတွင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ငလျင်ပြင်းအားပမာဏမှာ SSN က M ၈.၂ ဟု လည်းကောင်း၊ USGS က အစောပိုင်းတွင် M ၈.၀ ဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် M ၈.၁ ဟုလည်းကောင်း အသီးသီး ဖော်ပြခဲ့သည်။ ငလျင်ကြောင့် ကိုကိုးစ်နှင့် မြောက်အမေရိက ကျောက်ထုလွှာများအကြားရှိ ပြတ်ရွေ့ကို ၁၀ မီတာ (၃၃ ပေ) ခန့် မြင့်တက်စေခဲ့သည်။
ငလျင်သည် ၁၉၈၅ မက္ကဆီကိုစီးတီး ငလျင်ပြီးနောက် မက္ကဆီကိုတွင် အင်အားအကြီးဆုံး ငလျင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၃၂ ဂျာလီစကို ငလျင်နှင့် မတိမ်းမယိမ်း ဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကို သမ္မတ အင်းနရစ် ပီညာ နီတိုက "ရာစုနှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံး ငလျင်" ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး လူပေါင်း သန်း ၅၀ ခန့် ခံစားခဲ့ရသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ငလျင်ကြောင့် ၁ မီတာ (၃.၃ ပေ) နှင့်အထက်ရှိ ဆူနာမီလှိုင်းများကို ဆလီနာခရုဇ်မြို့တွင် လည်းကောင်း၊ ၁.၇၅ မီတာ (၅.၇ ပေ) ရှိ ဆူနာမီလှိုင်းကို ချီယာပတ်စ်တွင် လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ပစိဖိတ် ဆူနာမီ သတိပေးစင်တာက ဗဟိုအမေရိကရှိ ပစိဖိတ် ကမ်းရိုးတမ်းတလျောက်နှင့် အီကွေဒေါနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတို့တွင် ဆူနာမီ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။
ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲငလျင်များ အနည်းဆုံး ၁၂ ကြိမ်ကို USGS က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၄ UTC အချိန် ၀၀:၃၀ အထိ National Seismological Service (SSN) က နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များ အနည်းဆုံး ၁,၈၀၆ ခုနှင့် ပြင်းအား ၆.၁ မဂ္ဂနီကျူဒ်အထိ ရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
ပင်မ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 23:49:21 15°04′05″N 93°42′54″W﻿ / ﻿15.068°N 93.715°W﻿ / 15.068; -93.715 ပီဂျီဂျီယာပန်မြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၈၇ ကီလိုမီတာ (၅၄ မိုင်) ၆၉.၇ km (၄၃.၃ mi) ၈.၁
၁ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:01:38 15°52′01″N 94°05′17″W﻿ / ﻿15.867°N 94.088°W﻿ / 15.867; -94.088 ပါရီဒွန်၏ အနောက်တောင်ဖက် ၂၉ ကီလိုမီတာ (၁၈ မိုင်) ၃၅ km (၂၁.၇ mi) ၅.၇
၂ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:17:42 15°32′49″N 94°29′20″W﻿ / ﻿15.547°N 94.489°W﻿ / 15.547; -94.489 ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဒယ်မာ၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဖက် ၇၅ km (၄၇ mi) ၄၁.၃ km (၂၅.၇ mi) ၅.၄
၃ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:24:40 15°32′02″N 94°22′41″W﻿ / ﻿15.534°N 94.378°W﻿ / 15.534; -94.378 ပါရီဒွန်၏ အနောက်တောင်ဖက် ၇၇ km (၄၈ mi) ၅၀.၅ km (၃၁.၄ mi) ၅.၂
၄ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:33:38 15°20′42″N 94°16′19″W﻿ / ﻿15.345°N 94.272°W﻿ / 15.345; -94.272 ပါရီဒွန်၏ တောင်-အနောက်တောင်ဖက်၈၇ km (၅၄ mi) ၃၅.၀ km (၂၁.၇ mi) ၅.၂
၅ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:44:29 15°42′54″N 94°33′47″W﻿ / ﻿15.715°N 94.563°W﻿ / 15.715; -94.563 ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဒယ်မာ၏ တောင်ဖက် ၅၈ km (၃၆ mi) ၃၅.၀ km (၂၁.၇ mi) ၄.၉
၆ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:57:00 15°05′N 94°31′W﻿ / ﻿15.09°N 94.52°W﻿ / 15.09; -94.52 တိုနာလာမြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၁၃၇ km (၈၅ mi) ၂၁.၀ km (၁၃.၀ mi) ၅.၁
၇ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 1:08:47 15°27′N 94°47′W﻿ / ﻿15.45°N 94.78°W﻿ / 15.45; -94.78 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၉၂ km (၅၇ mi) ၁၀.၀ km (၆.၂ mi) ၅.၀
၈ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 2:38:38 15°31′N 94°50′W﻿ / ﻿15.52°N 94.83°W﻿ / 15.52; -94.83 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၈၃ km (၅၂ mi) ၅၀.၀ km (၃၁.၁ mi) ၅.၃
၉ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 2:59:57 15°35′N 94°55′W﻿ / ﻿15.58°N 94.91°W﻿ / 15.58; -94.91 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၇၃ km (၄၅ mi) ၅၀.၀ km (၃၁.၁ mi) ၅.၂
၁၀ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 3:34:34 15°10′N 94°20′W﻿ / ﻿15.17°N 94.33°W﻿ / 15.17; -94.33 တိုနာလာမြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၁၃၀ km (၈၁ mi) ၁၆.၀ km (၉.၉ mi) ၅.၉
၁၁ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 6:25:56 15°54′N 95°07′W﻿ / ﻿15.90°N 95.11°W﻿ / 15.90; -95.11 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၃၂ km (၂၀ mi) ၅၉.၀ km (၃၆.၇ mi) ၅.၀
၁၂ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 6:43:07 15°50′N 95°02′W﻿ / ﻿15.83°N 95.04°W﻿ / 15.83; -95.04 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၄၂ km (၂၆ mi) ၅၉.၀ km (၃၆.၇ mi) ၅.၂
၁၃ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 9:45:00 15°44′N 94°54′W﻿ / ﻿15.73°N 94.90°W﻿ / 15.73; -94.90 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၆၀ km (၃၇ mi) ၉၇.၀ km (၆၀.၃ mi) ၅.၅
၁၄ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 12:02:55 15°46′N 94°56′W﻿ / ﻿15.77°N 94.94°W﻿ / 15.77; -94.94 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၅၄ km (၃၄ mi) ၇၁.၀ km (၄၄.၁ mi) ၅.၀
၁၅ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 13:24:14 16°03′N 95°20′W﻿ / ﻿16.05°N 95.33°W﻿ / 16.05; -95.33 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၂၀ km (၁၂ mi) ၇၅.၀ km (၄၆.၆ mi) ၅.၁
၁၆ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 13:57:23 16°10′N 95°14′W﻿ / ﻿16.17°N 95.24°W﻿ / 16.17; -95.24 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၆ km (၃.၇ mi) ၆၅.၀ km (၄၀.၄ mi) ၅.၂
၁၇ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 21:32:07 15°05′N 94°20′W﻿ / ﻿15.08°N 94.33°W﻿ / 15.08; -94.33 တိုနာလာမြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၁၂၇ km (၇၉ mi) ၂၀.၀ km (၁၂.၄ mi) ၅.၄
၁၈ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 22:08:14 15°43′N 94°32′W﻿ / ﻿15.71°N 94.54°W﻿ / 15.71; -94.54 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၈၇ km (၅၄ mi) ၁၆.၀ km (၉.၉ mi) ၅.၃
၁၉ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 23:54:48 14°44′N 94°15′W﻿ / ﻿14.73°N 94.25°W﻿ / 14.73; -94.25 ပီဂျီဂျီယာပန်မြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၁၅၄ km (၉၆ mi) ၂၀.၀ km (၁၂.၄ mi) ၅.၆
၂၀ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:22:16 15°31′N 94°51′W﻿ / ﻿15.52°N 94.85°W﻿ / 15.52; -94.85 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၈၂ km (၅၁ mi) ၁၆.၀ km (၉.၉ mi) ၅.၂
၂၁ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊1:24:20 15°39′N 95°02′W﻿ / ﻿15.65°N 95.04°W﻿ / 15.65; -95.04 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၆၁ km (၃၈ mi) ၁၇.၀ km (၁၀.၆ mi) ၅.၀
၂၂ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 7:17:40 15°47′N 94°56′W﻿ / ﻿15.79°N 94.93°W﻿ / 15.79; -94.93 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၅၂ km (၃၂ mi) ၅၅.၀ km (၃၄.၂ mi) ၅.၄
၂၃ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 10:30:09 15°43′N 95°04′W﻿ / ﻿15.71°N 95.06°W﻿ / 15.71; -95.06 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၅၄ km (၃၄ mi) ၂၆.၀ km (၁၆.၂ mi) ၅.၀
၂၄ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊15:26:16 15°39′N 94°55′W﻿ / ﻿15.65°N 94.91°W﻿ / 15.65; -94.91 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၆၆ km (၄၁ mi) ၃၂.၀ km (၁၉.၉ mi) ၅.၀
၂၅ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 22:07:21 15°18′N 94°42′W﻿ / ﻿15.30°N 94.70°W﻿ / 15.30; -94.70 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၁၁၁ km (၆၉ mi) ၁၅.၀ km (၉.၃ mi) ၅.၈
၂၆ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 10:28:50 15°13′N 94°34′W﻿ / ﻿15.21°N 94.57°W﻿ / 15.21; -94.57 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၁၂၇ km (၇၉ mi) ၂၀.၀ km (၁၂.၄ mi) ၅.၀
၂၇ ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 9:55:58 15°15′N 94°33′W﻿ / ﻿15.25°N 94.55°W﻿ / 15.25; -94.55 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၁၂၄ km (၇၇ mi) ၁၆.၀ km (၉.၉ mi) ၅.၂
၂၈ ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 16:09:13 15°03′N 94°14′W﻿ / ﻿15.05°N 94.24°W﻿ / 15.05; -94.24 တိုနာလာမြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၁၄၀ km (၈၇ mi) ၂၀.၀ km (၁၂.၄ mi) ၅.၂
၂၉ ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 20:12:31 15°01′N 94°58′W﻿ / ﻿15.02°N 94.96°W﻿ / 15.02; -94.96 တိုနာလာမြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၁၂၆ km (၇၈ mi) ၃၄.၀ km (၂၁.၁ mi) ၅.၆
၃၀ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 0:08:45 15°01′N 93°59′W﻿ / ﻿15.01°N 93.98°W﻿ / 15.01; -93.98 ပီဂျီဂျီယာပန်မြို့၏ အနောက်တောင်ဖက် ၁၁၁ km (၆၉ mi) ၁၃.၀ km (၈.၁ mi) ၅.၃
၃၁ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 4:20:01 15°32′N 95°04′W﻿ / ﻿15.53°N 95.06°W﻿ / 15.53; -95.06 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ တောင်ဖက် ၇၃ km (၄၅ mi) ၁၆.၀ km (၉.၉ mi) ၅.၀
၃၂ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ 15:07:30 15°22′N 94°48′W﻿ / ﻿15.37°N 94.80°W﻿ / 15.37; -94.80 ဆလီနာခရုဇ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဖက် ၉၉ km (၆၂ mi) ၁၆.၀ km (၉.၉ mi) ၅.၀
၂၀၁၇ ချီယာပတ်စ် ငလျင်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်များ
မဂ္ဂနီကျူဒ်အလိုက် ငလျင်များပြ ဂရပ်ပုံ
Mw ၈.၀ ကျော်အတွက် အနီရောင်နှင့် Mw ၅.၀ ကျော်အတွက် လိမ္မော်ရောင်
ဂျူချီတန်ဒီဇာရာဂိုဇာမြို့ မြို့တော်ခန်းမ ပျက်စီးမှု
မြို့တော်ခန်းမ (၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာ)
၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ က တွေ့ရသော မြို့တော်ခန်းမ
ချီယာပတ်စ်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် လူပေါင်း ၁.၅ သန်းခန့် ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီး နေအိမ်ပေါင်း ၄၁,၀၀၀ ခန့် ပျက်စီးခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီး ဂျိုဆေး ကယ်ဇာဒါ က ငလျင်ကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၉၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အော့ဆာကားပြည်နယ်တွင် ၇၈ ဦး၊ ချီယာပတ်စ်ပြည်နယ်တွင် ၁၆ ဦးနှင့် တာဘာစကိုပြည်နယ်တွင် ၄ ဦး ဖြစ်သည်။ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးက ချီယာပတ်စ်ပြည်နယ်ရှိ ၁၂၂ မြို့ကို အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခဲ့ပြီး မက္ကဆီကိုစစ်တပ်က သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အကူအညီများ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ် ၁၁ ခုရှိ ကျောင်းများကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ပိတ်ထားခဲ့သည်။ ဗယ်ရာခရုဇ်ပြည်နယ်တွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ယင်းပြည်နယ်သည် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် ကာတီရာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ အော့ဆာကာပြည်နယ်ရှိ ဂျူချီတန်ဒီဇာရာဂိုဇာမြို့သည် ငလျင်ဗဟိုနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်ပြီး "အုတ်ပုံဘဝ ရောက်သွားကြောင်း" မြို့တော်ဝန်က ဆိုသည်။
ငလျင်ကြောင့် မက္ကဆီကိုစီးတီးရှိ အဆောက်အဦများ ယိမ်းခါခဲ့ပြီး မီးပျက်တောက်သွားမှုကြောင့် လူ ၁.၈ သန်းခန့် အမှောင်ကျခဲ့သည်။ မက္ကဆီကိုစီးတီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင်လည်း မှန်များ ကွဲကြေခဲ့သည်
ငလျင်ဗဟိုသည် မက္ကဆီကို-ဂွါတီမာလာ နယ်နမိတ်အနီးတွင် ဖြစ်သည့်အတွက် ငလျင်လှုပ်ခါမှုကို ဂွါတီမာလာစီးတီးတွင်လည်း ခံစားခဲ့ရကာ နိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် အဆောက်အဦများ ပျက်စီးမှုရှိခဲ့သည်ဟု သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး အမျိုးသား ပေါင်းစည်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (CONRED) ကဆိုသည်။ သမ္မတ ဂျင်မီ မိုရေး က ဂွါတီမာလာနိုင်ငံသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အော့ဆာကာပြည်နယ်၊ ဂျူချီတန်မြို့ရှိ နေအိမ်ပျက်အစီးတစ်ခုကို ကြည့်ရှုနေသော သမ္မတ အင်းနရစ် ပီညာ နီတို
မက္ကဆီကိုစီးတီး မြို့တော်ခန်းမရှိ ငလျင်ဒဏ်ခံရသူများအတွက် စုဆောင်းရေး စင်တာ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဟာဗေး ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံဒေသများတွင် ကူညီရန် စေလွှတ်ထားသော မက္ကဆီကိုအဖွဲ့များကို ငလျင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့သည်။
↑ Cumes၊ William (7 September 2017)။ Temblor de 7.7 grados sacude Guatemala (in Spanish)။ Prensa Libre။
↑ ၂.၀ ၂.၁ SSNMexico (13 September 2017)။ Hasta las 7:30 pm se han registrado 1806 réplicas (la mayor de M6.1) del sismo ocurrido el7de septiembre en el golfo de Tehuantepec (M8.2)။
↑ "Earthquake of magnitude 8.1 strikes off Mexico's Pacific coast"၊ BBC News၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ M 8.1 – 87 km SW of Pijijiapan, Mexico။ United States Geological Survey။7September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tsunami Message Number5(0653 UTC Fri Sep 8 2017)။ National Weather Service (United States) (8 September 2017)။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Richard Hartley၊ Parkinson။ "Most powerful earthquake in 230 years hits Mexico sparking tsunami"၊ Metro၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World – M7+ in 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Singh, S.K. (2000). "The Oaxaca earthquake of 30 September 1999 (MW = 7.5)". Seismological Research Letters 71 (1): 67–78. doi:10.1785/gssrl.71.1.67. Retrieved on 8 September 2017.
↑ Taylor၊ Adam။ "Mexico's cataclysmic history of earthquakes"၊ The Washington Post၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Se activa, por error, alerta sísmica en CDMX; descartan sismo" (in Spanish)၊ El Universal၊6September 2017။7September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Reporte de Sismo: Sismo del día 07 de Septiembre de 2017, Chiapas (M 8.2) (in Spanish)။ National Seismological Service (8 September 2017)။ 8 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Osborne၊ Hannah။ "Biggest earthquake to hit Mexico in overacentury moved fault by 32 feet"၊ Newsweek၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Linthicum၊ Kate။ "Mexican authorities report an 8.4 earthquake off southern coast, raising tsunami fears"၊ The Los Angeles Times၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Schladebeck၊ Jessica။ "Mexico hit by 8.4 earthquake, tsunami warnings issued"၊ New York Daily News၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lafuente၊ Javier။ "Un fuerte terremoto sacude el sur de México" (in Spanish)၊ El País၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Partlow၊ Joshua။ "At least 58 killed in massive earthquake off Mexico coast"၊ The Washington Post၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mexico earthquake: mass evacuations after strongest tremor inacentury"၊ The Guardian၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tsunami Message Number 17။ National Weather Service (8 September 2017)။9September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Graham၊ Chris (8 September 2017)။ Mexico hit by 'strongest earthquake inacentury' as magnitude 8.2 tremor triggers tsunami waves – latest news။ The Telegraph။
↑ At least six die in huge Mexico quake, small tsunami triggered – Video။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Strong Earthquake Hits Off Mexico’s Coast"၊ The New York Times၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Death toll rises to 60 in powerful Mexico earthquake"၊ Associated Press၊9September 2017။9September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Thousands of homes wrecked by huge Mexican quake, death toll at 90"၊ Reuters၊ 10 September 2017။ 10 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ ၂၄.၂ Times၊ Global။ Death toll from Mexico earthquake climbs to 98 – Global Times။
↑ Mandujano၊ Isaín။ "La Segob declara "emergencia extraordinaria" en 122 municipios de Chiapas por sismo" (in Spanish)၊ Proceso၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9September 2017။
↑ Garcia၊ Dennis A.။ "Sedena aplica Plan DN-III-E en Chiapas y Oaxaca" (in Spanish)၊ El Universal၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sherman၊ Cristopher။ "'The house moved like chewing gum': Dozens killed in Mexico earthquake as country braces for hurricane"၊ The National Post၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cortes၊ Jose။ "At least 58 die in Mexico's strongest quake in 85 years"၊ Reuters၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Malkin၊ Elisabeth။ "Mexico Earthquake, at 8.1 Magnitude, Is Felt for Hundreds of Miles"၊ The New York Times၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Linthicum၊ Kate။ "From toppled buildings to at least 32 deaths, Mexico's most powerful quake in years prompts chaos"၊ The Los Angeles Times၊ 8 September 2017။ 8 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Agren၊ David။ "Mexico withdraws Harvey aid offer as it focuses on earthquake recovery"၊ The Guardian၊ 11 September 2017။ 11 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၇_ချီယာပတ်စ်_ငလျင်&oldid=674305" မှ ရယူရန်
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော ငလျင်များ
ဂွါတီမာလာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော ငလျင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၅:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။